Sebenzisa iiFomathi zeWordPress kunye neGravity ukuFaka iiNkokeli | Martech Zone
Benzisa WordPress njengoko inkqubo yolawulo lomxholo wakho iqhelekile kule mihla. Uninzi lwezi ndawo luhle kodwa lusilela nasiphi na isicwangciso sokufaka ukuthengisa ngaphakathi. Iinkampani zipapasha amaphepha amhlophe, uphononongo lwamatyala, kunye nokusebenzisa iimeko ngeenkcukacha ezinkulu ngaphandle kokufaka iinkcukacha zonxibelelwano zabantu abazikhuphelayo.
Ukuphuhlisa iwebhusayithi kunye nokukhuphela okunokufumaneka ngeefom zobhaliso sisicwangciso esihle sentengiso. Ngokuthimba ulwazi loqhakamshelwano okanye mhlawumbi nokuba ukhethe ukungena kunxibelelwano oluqhubekayo lwe-imeyile-uvumela umsebenzisi ukuba azi ukuba angaqhakamshelana nabo ukubuyisela ulwazi lwabo loqhakamshelwano.
Ukuba awusebenzisi iWindowsPress, ufuna ukusebenzisa iifom kumaqonga amaninzi okanye kwiindawo, okanye uneemfuno eziphambili kakhulu, ingcebiso yam ihlala ihleli IFomstack. Kulula ukuyisebenzisa, ukuseta, kunye nokushumeka ngaphandle kwendawo yakho. Ukuba usebenzisa iWindowsPress, Gravity Forms wenze iplagi eyaziwayo esebenzela ukusebenza kakuhle ekubambeni idatha.
Iifom zeGravity kukutsala kunye nokulahla iplagi yefom ngokukodwa eyenzelwe iWindowsPress. Iphuhliswe kakuhle, inetoni yokongeza kunye nokudityaniswa, kwaye- okona kulungileyo- igcina konke ukungeniswa ngaphakathi kweWindowsPress. Uninzi lwezixhobo zefom apha phaya zityhala idatha kwidilesi ye-imeyile okanye indawo engaphandle. Ukuba kukho umba ngokudlula kwedatha, awunalo naluphi na uhlobo lokugcina.
Iimpawu zeFom yeGrivity zibandakanya
Kulula ukuyisebenzisa, iifom ezinamandla -Yakha ngokukhawuleza uyile iifom zakho zeWordPress usebenzisa umhleli wefom ebonakalayo ebonakalayo. Khetha iinkalo zakho, qwalasela ukhetho lwakho, kunye nokufaka ngokulula iifom kwindawo yakho ye-WordPress enikwe amandla usebenzisa izixhobo ezakhelweyo.
I-30 + ikulungele ukusebenzisa iiFom Fields -Iifom zeGravity zizisa iintlobo ezahlukeneyo zegalelo kwifom yakho kwaye usithembe, iincwadana zakho ziya kubulela kuwe. Khetha kwaye ukhethe ukuba yeyiphi indawo ofuna ukuyisebenzisa usebenzisa umhleli wefom ekulula ukuyisebenzisa.
Logic enemeko -Logic enemiqathango ikuvumela ukuba uqwalasele ifom yakho ukubonisa okanye ukufihla amasimi, amacandelo, amaphepha, okanye neqhosha lokungenisa ngokusekwe kukhetho lomsebenzisi. Oku kukuvumela ukuba ulawule ngokulula ukuba loluphi ulwazi oluceliweyo ukuba lubonelelwe ngumsebenzisi kwindawo yakho ene-WordPress kwaye ulungelelanise le fomu ngokukodwa kwiimfuno zabo.
Izaziso email -Uzama ukugcina ngaphezulu kwazo zonke izikhokelo ezivela kwindawo yakho? Iifom zeGravity zinabaphenduli be-imeyile abazokugcina ekwazini ngalo lonke ixesha kungeniswa ifom.
Ukulayishwa kweFayile -Ufuna ukuba abasebenzisi bakho bangenise amaxwebhu? Iifoto? Ilula lonto. Yongeza nje iifayili zokulayisha ifayile kwifom yakho kwaye ugcine iifayile kwiserver yakho.
Gcina kwaye uqhubeke - Uyile ifom ecacisiweyo kwaye kungathatha ixesha ukuyigqiba. NgeeFom zoMxhuzulane, unokuvumela abasebenzisi bakho ukuba bagcine ifom egcwaliswe ngokuyinxenye kwaye babuye kamva bayigqibe.
Ukubala - Iifom zeGravity ayisiyiyo iplagi yakho yemihla ngemihla ... Yenza ubalo oluphambili ngokusekwe kumaxabiso endawo angenisiweyo kwaye uyothusa abahlobo bakho.
Unxibelelaniso -I-Mailchimp, i-PayPal, i-Stripe, i-Highrise, i-Freshbooks, i-Dropbox, i-Zapier kunye nezinye ezininzi! Hlanganisa iifom zakho ngeenkonzo ezahlukeneyo kunye nezicelo.
Gravity Forms yinto eyimfuneko kuyo yonke indawo ye-WordPress. Sobabini singamalungu kwaye sinelayisensi yophuhliso lobomi bonke!
Khuphela iiFom zoMxhuzulane
tags: khokelela khokelaiifomuIifom zomxhuzulaneurhwebo inboundPluginWordPressiifom zegama lokucinezelaiplagi yamagama
Oktobha 11, 2009 ngo-5: 19 PM
Ividiyo eluncedo kakhulu, Douglas. Gcina loo nto izayo.
Oktobha 26, 2009 ngo-7: 46 PM
I-tut emnandi, ilula kwaye incede lo mntu umtsha we-GravityForms afumane ifomu yam yokuqala kwaye asebenze. http://bit.ly/4ANvzN
Ngaba uyayithanda le ngxoxo ishushu? Kubonakala ngathi yongeza inqanaba "lokubhideka" (okt amaqhosha angaphezulu) kwabanye abafundi… kwaye kunzima ngokwaneleyo ukufumana amagqabantshintshi ngoku!
Aug 22, 2011 ngo-7:24 PM
Iifom zeGravity kunye ne-WordPress yindibaniselwano enkulu. Ngaba unazo naziphi na iingcebiso zokufihla eyona URL kwifayile yokukhuphela kwaye ubonise i-URL yokukhuphela eyahlukileyo enokusetyenziswa kube kanye kuphela? Ngaba into efana ne-bit.ly ingasetyenziselwa ukwenza ikhonkco lokukhuphela ixesha elinye? Ndicinga usetyenziso lokukhuphela iingoma ezithengiweyo okanye ezinye iifayile ofuna ukhuseleko oluthe chatha kuzo?
Aug 22, 2011 ngo-7:51 PM
Ngokwenene andiyifihli eyona URL - ndibeka ikhonkco kwimpendulo ye-imeyile ngoko ifuna ukuba babe nedilesi ye-imeyile esebenzayo. Ndiqinisekile, ngekhowudi encinci, unokubabonelela ngekhonkco eline-hash eyidilesi ye-imeyile efihliweyo- emva koko ukuba bayayicofa, unokubona ukuba sele ikhutshelwe kanye kwaye uyeke nabani na ongomnye ukuba ayikhuphele.
Aug 22, 2011 ngo-8:10 PM
Ukugcina iliso xa ikhutshelwa kwaye ukususa okanye ukutshintsha ikhonkco akuyi kusebenza kakuhle. Ukukwazi ukusebenzisa uhlobo olufutshane lwe-URL yesixhobo sokuvelisa ngokukhawuleza kunye nekhonkco elifihliweyo kunye nokwabelana nomsebenzisi oza kusebenza inani elichazwe kwangaphambili lamaxesha kuya kuba ludibaniso oluhle kakhulu.
Aug 22, 2011 ngo-8:37 PM
Utsho kanye lento ndigqiba kuyenza. Leyo yindawo 'ngekhowudi encinci'.
Epreli 30, 2013 ngo-7: 14 AM
yongeza umphathi wefayile kwaye wenze iindawo ezilula zokukhuphela - akusekho url's
Meyi 10, 2015 kwi-12: 13 AM
Ngaba akukho mntu usebenzisa iifomu zomxhuzulane + ukudityaniswa kwe-chimp ye-imeyile kunye ne-drip-like popup / ibhokisi ye-popover ukubamba iidilesi ze-imeyile kwiileta zeendaba? Ndiqaphele ukuba le ndawo isebenzisa idriphu kwaye ibifuna indlela yokuba nembonakalo efana nedriphu ngaphandle kweendleko.
Sisebenzisa iiFom zeGravity kwaye siphumeze i-Mailchimp kodwa asikaboni ukuba ukhangela ntoni. Ndiyavuma-kuya kuba kuhle ukuba nesixhobo nje esilula! OptinMonster ayimbi kakhulu kwaye inoqwalaselo oluphezulu.